प्रचण्डका पाँच कमजोरी | Nepali Virals
अप्रिल 1, 2016 | बिर्सेका, राजनीति, हट टपिक्स |0comments
प्रचण्ड, अर्थात् पुष्पकमल दहाल। वर्तमान एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष। वास्तवमा उनी जत्तिको नेता र उनको जत्तिको सफलता नेपालको राजनीतिमा सायदै कसैले पाएको थियो। उनी नेपालको राजनीतिका एकमात्र यस्तो नेता हुन् जसले आफैले कल्पना गरेको भन्दा ठूलो सफलता छोटो समयमा पाए र त्यति नै छोटो समयमा गुमाए पनि। कुनै समयमा ‘प्रचण्डको आदेश’ भन्नासाथ युवा तथा कार्यकर्ता मर्न मार्न तम्सिन्थे। साँच्चै प्रचण्ड ‘प्रतापी’ नै भएर उदाएका थिए। माओवादीको भन्दा फरक विचार राख्नेले गाऊँमा बास त परैको कुरा उस्तै परे सास नै गुमाउने अवस्था सकिएपछी भने माओवादीको डर घट्दै गयो साथै माओवादी ’boutका भ्रम पनि तोडिए साथै प्रचण्डको करिश्मा नि हराउँदै गयो।
माओवादी द्वन्द्वकालमा प्रचण्डको ’boutमा फैल्याईएका भ्रमको पर्दा हट्न थालेपछी प्रचण्डको राजनीति पनि ओरालो लाग्यो। र यतिखेर प्रचण्ड राजनीतिक शक्ति र महत्वका हिसाबमा प्रचण्ड छैनन उनि त पुष्पकमल दाहाल बनिसके। शान्ति प्रक्रिया मार्फत प्रजातन्त्र स्वीकारेर खुला समाजमा पस्दा उनको ’boutमा बनाइएको भ्रमको पर्दा ह्वांगै हुनु नै उनको राजनीतिको सबैभन्दा कमजोर पक्ष हुन पुग्यो जसले उनका अरू कमजोरीहरू पनि सतहमा देखिए। र उनी प्रतिको आशा, विश्वास र संभावना जुन नेपाली जनताले परिवर्तन र बलिदानको रूपमा ठड्याएका थिए ती सबै सद्दाम हुसेनको बगदादमा ठडिएको सालिक जसरी नै ढले। धेरै मध्ये प्रचण्डका पाँच सम्बन्ध यस्ता छन् जसले उनको व्यक्तित्व साथै दल र बाटोलाई नै कमजोर बनाई रहेका छन्।जसले उनको ओज, महत्व र सामयिकता नै समाप्त पारेको छ।
भारतीय दूतावासमा प्रचण्ड-बाबुराम र मधेशी दलका नेता जाँड पार्टीमा रमाउँदै ! नेपाललाई कमजोर बनाउने राजनीतिक आवरणका शक्ति पनि माओवादी र मधेशी नै हुन् भन्ने अहिले प्रमाणित भईसकेको छ। र यी सबैको सम्बन्ध कता छ भन्ने यस्तै पार्टीले खुलस्त पार्ने गरेको छ।
१. भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्ध
प्रचण्डलाई राजनेता बन्न नसक्नु अनि उनको राजनीतिक उचाइ स्वात्तै घट्नुको प्रमुख कारण नै उनको भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धको खुलासा हो। माओवादीकालमा उनको राजनीतिक तथा रणनीतिक सत्य अत्यन्त गोप्य थियो अनि उनका ’boutमा अनेकन प्रपोगाण्डा फैल्याइएका थिए। जसको भ्रममा आम नेपाली जनता साथै देशको राजनीतिक शक्ति, राज्यको प्रशासन र फौजी संरचना समेत भ्रममा थिए। अरू त अरू आफुलाई राज्यसत्ताको हकदार ठान्ने राजा र उनको दरबार प्रशासन समेत यस’boutमा पूर्ण त बेखबर थिए। नत्र आफूलाई खसाल्ने खाडल बनिसकेको राजा ज्ञानेन्द्रले आभास पक्कै पाउने थिए।
खुला राजनीतिमा आएपछी प्रचण्डको भारतीयदूतावासमा नियमित हुने बसउठ र भोज साथै उनका राजनीतिक निर्णयहरू सबै भारत निर्देशक हुने गरेको घाम जस्तै छर्लंग भयो। त्यसमाथी भारतीय पूर्व सैनिक अधिकारीको पुस्तकले तत्कालिन माओवादीका नेता प्रचण्ड र बाबुरामले भारतको खुफिया एजेन्सी र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा नेपालमा भारतको स्वार्थलाई प्रमुख स्थान दिने, त्यसको पक्षमा भारतीय गुप्तचर निकायसँग मिलेर काम गर्ने सम्झौता गरेर भारतमा आश्रय र भारतको सहयोग पाएको खुलासा नै गरयो। कान्तिपुर दैनिकका सम्पादक सुधिर शर्मा र राजा नेन्द्र र वीरेन्द्रका एडीसी रहेका नेपाली सेनाका अधिकारीको पुस्तकमा उल्लेख भएका तथ्य तथा प्रसंगले पनि उनको भारत सम्बन्ध र उनले कसका लागी काम गरेका छन् भन्ने सबै खुलस्त गरेको नै छ। त्यसो त विकिलिक्सले उजागर गरेको तथ्यले नि माओवादी भारतको सद्भाव र सहयोगमा नेपालमा अस्थिरता निम्त्याएर यहाँको श्रोत साधनमा भारतको एकलौटी चलाउने साधनको रूपमा भारतिय खुफिया एजेन्सी ‘रअ’ले स्थापित गरिएको समुह भएको देखाएको थियो।
पुष्पकमल र सीता दाहाल, पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बखत। फोटो: नेपालप्लसडटकम
२. श्रीमती सीता दाहाल
हरेक लोग्ने मानिसको एउटा सबैभन्दा ठुलो कमजोरी नै श्रीमती हो। दुनियाँलाई जित्ने बादशाह पनि आफ्नै श्रीमतीसँग हार्छ। प्रचण्ड नि कुनै नयाँ खेतको मुला साबित भएनन्। बाहिर सबैका लागी प्रचण्ड भएपनि घरमा श्रीमती सिता दाहालको लागी घुर्की देखाएर मनाउन सक्ने लोग्ने मात्र भए। जसले गर्दा उनको नैतिक धरातल नै धरापमा परयो। छोराको तीन बिवाह देखी, बुहारी र नाती माथिको घरेलु हिंशाको श्रृंखला त घर बाहिर खासै आएन तर छोरी पट्टिका छोरानाति देखी आफन्तलाई भूकम्प पीडितका नाममा चिन घुमाउने देखी आर्थिक लेनदेनमा सिता दाहालको आशिर्वाद र हुकुम चलेको देखिन्छ। यहाँ सम्म कि पार्टिको कुनै पद विशेषमा नियुक्तिका लागि पनि उनको आशिर्वाद र दबाबले काम गर्ने गरेको छ। ओली सरकारका गृहमन्त्री नै प्रचण्डको गृहमन्त्रीको सेटिंगमा नियुक्त भएको कुरा त छिपेकै छैन पार्टीमा पनि। पार्टीका पदको भागबण्डामा पनि सिताजीको भूमिका हुने गरेकाले पार्टीमा रूष्ट हुनेको संख्या निक्कै छ। प्रचण्ड क्याम्प छोडेकालाई यो राम्रै थाहा भएको कुरा हो। यो पनि प्रचण्ड हेडक्वाटर रहेको माओवादी टुक्रनुको एउटा कारण हो। छोरा प्रकाशको घर गृहस्थी बिगार्नमा पनि सिताकै हात देखिन्छ, प्रचण्ड त टुलुटुलु। ‘माओका नि १६ श्रीमती थिए…’ भन्ने भनाई सिता कै हो।
प्रचण्डको पारिवारिक तस्वीर। सत्ता र शक्तिमा आएपछी प्रचण्डका सन्तानको शान नै बेग्लै भएको छ। तस्वीर: अनलाईनखबरडटकम
३. सन्तान मोह
सन्तान मोहका सिलसिलामा त प्रचण्डले महाभारतका धृतराष्ट्रलाई नि पछाडी पार्दछन्। त्यसको उदाहरण कतै खोज्न जानै पर्दैन। पार्टीमा छोरी ज्वाईं, छोरा अनि आफन्तको पद के कसो छ, र एमाओवादीबाट मिल्ने जति सुविधा कसरी कसलाई मिलेको छ हेरे नै थाहा हुन्छ। दुनियाँका छोराछोरीलाई कुकुर मराई बनाउने प्रचण्ड आफ्ना सन्तान रोगले गलिएर (लाखौं खर्च गरेपछी पनि केही नलागेर) मर्दा डाँको छोडेर रोएको त सार्वजनिक स्थानमै पो हो त। समाचार पनि हेर्नु सुन्नु भएकै हो नि हैन? छोरा प्रकाश सगरमाथा चढ्दा राज्यको दुई चार करोड सहयोग पनि मिलेकै हो। त्यसो त छोरा प्रकाशको हरकतलाई पूर्व युवराज पारस शाहको उदण्डतासँग जोडेर नि हेरिएकै थियो। मनलागि बोल्न र गर्न प्रचण्डका छोराछोरीलाई रोक्ने कसले। त्यसमाथी दुईचार अनलाईन चलाइर प्रपोगाण्डा खेती नि चलेकै छ। त्यसो त प्रचण्डका ससुराली खलक र भाईखलकलाई पनि यसैमा जोड्दा हुन्छ, उनिहरू पहिले कस्ता थिए र अहिले के गरिरहेछन् बुझे पनि हुन्छ। ‘सारी गवाँई एक तरफ जोरूका भाई एक तरफ’ भन्ने कहावत त उनले भारतमा बस्दै सुनेका हुन् त्यसलाई चरितार्थ मात्र नेपालमा गरिरहेका छन्।
नझुक्किनुस्, यी बाबुराम प्रचण्ड नै हुन्। करिब १० वर्ष जति पुरानो फोटो हो। तस्वीर: नेकपा एमाओवादी
पैसाको ’boutमा त प्रचण्डको धारणा के छ संसारलाई थाहा भइसक्यो। वर्तमानका केपी ओलीले नै १० अर्ब दियो भने एमाओवादीले कुनै आन्दोलन गर्दैन भनेकै हुन्। माओवादीको नाममा हिंश्रक आन्दोलन गर्नु अघि, गर्दाको बखत र सार्वजनिक जिवनमा आउँदा सम्म प्रचण्डको जिवन र अहिले १० वर्षको सान सौकत हेर्दा नै प्रचण्डको पैसाको वृद्दिदर थाहा हुन्छ। बिना कुनै पेशा, व्यवसाय कसरी आयो प्रचण्डसँग यत्रो पैसा? भन्ने त कुनै प्रश्न नै हुनसक्दैन। माओवादी लडाकु सिविरको आर्थिक हिनामिना, स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुको चेक खोसिएको काण्ड देखी अजय सुमार्गीको अनौठो आर्थिक सम्वृद्धी अनि प्रचण्ड बसेको घर साथै भाटभटेनीमा प्रचण्डको लगानीको गाईंगुईं अनि भाटभटेनिको आक्रामक लगानी बृद्धिको समाचार पनि पढ्नु भएकै होला। देशमा जति पनि ठुला आर्थिक घपला भएका छन् त्यसका पात्रहरू प्रचण्डसँगै नजिक हुनु पनि रहस्यकै कुरा छ। चाहे रक्तचन्दन तस्कर होस् या टुप्पावाट पलाएका व्यवसायी सबै प्रचण्ड निकट। भनिन्छ पैसा र त्यसको व्यवस्थापन प्रचण्डलाई भारी परिरहेको छ। त्यसमा पनि सम्पत्ती सुद्धिकरण वा भ्रष्ट्राचारको केसमा पर्ने डरले आजकल प्रचण्ड भारतको लाइन विपरित हुने कुरा मुखबाट निकाल्न डराईरहेका छन्।
कोेटेश्वरका होटल व्यवसायी रामहरी श्रेष्ठकोमा खाना खाँदै माओवादीका उच्च तहका नेता प्रचण्ड, बाबुराम, बादल लगायत। पछी आर्थिक हिनामिना खुल्ने संभावनाका कारण माओवादीले नै श्रेष्ठको हत्या गरयो। तस्वीर: पिपल्सरिभ्यू
प्रचण्डसँग राजनीतिक सिद्धान्तको कुरा जोड्दा धेरैलाई हाँसो रोक्न गारो हुनसक्छ। खासमा प्रचण्डको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको नै सिद्धान्त हो। उनको एउटै सिद्धान्त ‘एनि हाउ, पैसा जम्मा गर र शक्तिमा रहु’ भन्ने हो। यसलाई समाजवाद, माओवादको सप्कोले छोप्न उनलाई कम्ता हैरानी छैन। पछिल्लो समय लारक्याल लामाले फेरी सप्को हटाएर उदांगो पारिदिईहाले। उनै के त गोली बैंक लकरमा राख्ने बौद्धमार्गी नि। 😛 पहिले पहिले बाबुराम र मोहन वैद्यले सैद्धान्तिक कुरा गरिदिन्थे यतिखेर सबै लाखापाखा लागेकाले नि उनलाई सिद्धान्तको कुरा गर्न गारो परिरहेको छ। त्यसैले त बाबुराम छुट्टेर गएपछी एमाओवादी यतिखेर भुईं न भाँडामा भएको छ। लडाकुको चेक खोस्ने देखी भारतीय दूतावासमा जाँड पार्टी गर्ने त छोडौं आफैले उचालेको मुद्दा समावेसी र समानुपातिकको व्यवस्था सभासद तथा सांसद पद बिक्रि गर्न बाहेक अरू काममा आएन। माओवादीले प्रचण्डको नेतृत्वमा लिएका कुनै पनि निर्णय र गरेका काम कतै कुनै सिद्धान्तमा टेकेर हैन कि उनको व्यक्तिगत स्वार्थमा टेकेर गरिएका थिए। नत्र बन्दुकका गोली बैंकमा राख्ने बौद्धमार्गी कसरी सभासद बन्नु। सत्य के हो भने गरिब जनताको बुद्धि भुट्ने अनेकन सिद्धान्त र मुक्तिको नारा रच्ने प्रचण्ड सामन्तवाद, साम्राज्यवादको विरोध गर्दै आफै सामन्त बने र साम्राज्यवादी र बिस्तारवादीको खेलौना साबित भए।